October 10, 2021 - Channel Lover
ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ စစ်သားတွေကို PPDF မှ မိုင်းဖောက်ခွဲခဲ့သည့်(ရုပ်သံဖိုင်)
October 10, 2021 by Channel Lover
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကို PPDF က ၂ ကြိမ် မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်၊ စစ်ကောင်စီမှ ၁၃ ဦး ထက်မနည်း သေဆုံးနိုင် (ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့နယ် ကိုးလောင်းပြိုင်ကွေ့အနီးတွင် ဆိုင်ကယ်စီးနင်းလာသော စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်၌ Pale People’s Defence Force (PPDF) တပ်ရင်း (၄) ရဲဘော်အောင်ကြီး၊ ရဲဘော်မောင်မောင်တုတ်တို့တပ်စုက မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ ၆ ဦး သေဆုံးကာ ဆိုင်ကယ် ၃ စီး ပျက်စီးသွားကြောင်း PPDF က ထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါ ဆိုင်ကယ်များနောက်မှ ကပ်လိုက်လာသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါလာသည့် Express မော်တော်ယာဉ်သည်လည်း … Read more
အပျိုစင်သတို့သမီးလေးတို့ မင်္ဂလာဦးည မတိုင်ခင် သိထားသင့်တာတွေ
အမျိုးသားတွေက စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ စိတ်လောကြီးမှုတွေ ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ မနှစ်မြို့တဲ့ အပြုအမူတွေကို ပြုလုပ်မိကောင်း ပြုလုပ်မိမှာပါ အပျိုစင်သတို့သမီးလေးတို့ မင်္ဂလာဦးည မတိုင်ခင် သိထားသင့်တာတွေ အပျိုစင် သတို့သမီးလေးတို့ အတွက် မင်္ဂလာဦးည ဆိုတဲ့ ကိစ္စကြီးက တွေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာ ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ကိစ္စကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် သတို့သမီးလေးတွေ အတွက် ဒီကိစ္စက ဘယ်လိုမှ ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့ အတူ မင်္ဂလာဦးညလေးကို အပေးအယူမျှမျှနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်မှသာ ရှေ့လျှောက် အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဘဝကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အတွေ့အကြုံ မရှိတဲ့ သတို့သမီးလေးတို့အတွက် သိထားသင့်တာလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ပွဲအပြီး တစ်ခါတည်း အိပ်ခန်းထဲ မဝင်ပါနဲ့ မနက်ပိုင်းပွဲတွေ ဆိုရင် … Read more
မင်္ဂလာဦးညမှာ မျက်ကွင်းတွေညိုနေလို့ သူငယ်ချင်းအပျိုမတစ်သိုက်က မေးမြန်းကြည့်သောအခါ
မင်္ဂလာဦးည (၃)ဦးအကြောင်း အပျိုလေးတွေမသိပါဘူး ပူပူနွေးနွေး မင်္ဂလာဆောင် ပြီးကာစ ကောင်မလေးကို သူ့သူငယ်ချင်း အပျိုမ တစ်သိုက်က တိုးတိုးတိတ်တိတ်မေးသည်။ “ဟဲ့… နင့်မှာ မျက်တွင်းတွေကိုကျလို့ တစ်ညလုံးမအိပ်ဘူးလား??? မင်္ဂလာဦးည အတွေ့အကြုံလေး ငါတို့သိရအောင်ပြောပြပါလား?” “တော်ပါပြီဟာ မပြောချင်ပါဘူး” “ပြောပါဟာ နင်ကလည်း ငါတို့တွေဗဟုသုတရတာပေါ့” “အို… ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောရမှာ ရှက်စရာကြီး” “ပြောပါဟာ နင်ကလည်း… အချင်းချင်းတွေပဲဟာ” “ဒီလောက်တောင်သိချင်နေကြလည်း ပြောပြမယ်ဟာ။ မနေ့ညက တစ်ညလုံးမအိပ်ရဘူးဟ” “ဟင်… ဒီလောက်တောင်လား!!!” “အေးလေ… လက်ဖွဲ့တွေဝေစုခွဲကြရင်း လင်မယားနှစ်ယောက် ရန်သတ်နေကြတာ မိုးလင်းပေါက်ပဲဟေ့…” ရယ်မောခြင်းဖြင့် ဘဝအမောများ ပြေကြပါစေ 😁 😁 😁 😁 😁 unicode မင်ျဂလာဦးည (၃)ဦးအကွောငျး အပြိုလေးတှမေသိပါဘူး ပူပူနှေးနှေး မင်ျဂလာဆောငျ ပွီးကာစ … Read more
တော်လှန်ရေးရှေ့တန်းနယ်မြေထဲက ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ရတီအုန်း(ရုပ်သံ)
ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည် တော်လှန်ရေးရှေ့တန်းနယ်မြေထဲက ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ရတီအုန်း “ကျွန်မတို့တော်လှန်နေမယ့်သူတွေကတော့ မရှိရင်ရှိတဲ့ လက်နက်ပေါ့၊ ကျွန်မတို့ဆွဲကိုင်ထားဆဲ့ဓါးတွေ၊လေးဂွတွေနဲ့ ဒီလိုလက်နက်တွေကိုကိုင်ပြီး ဒီတိုက်ပွဲကို ကျွန်မတို့နိုင်တဲ့အထိကျိုးစားမှာပါ၊ ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်မတို့ကို ယုံကြည်ပေးပါ၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မဆုတ်ဘဲ ဒီတိုက်ပွဲကိုဆက်တိုက်သွားမှာပါ၊ ပြည်သူတွေကလည်း နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ကူညီပေးကြပါ” စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကာ စာသင်ခန်းအားစွန့်ခွါပြီး ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲနေရာအထိ ရောက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေသူ ကထိက ဒေါ်ရတီအုန်း(အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း – ကလေးမြို့) နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး မြေပြင်တွင်သူမ၏ အတွေ့ကြုံများအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။ မေးမြန်း/တင်ဆက် – ဝေယံမိုး unicode တျောလှနျရေးရှတေ့နျးနယျမွထေဲက ကြောငျးဆရာမ ဒျေါရတီအုနျး “ကြှနျမတို့တျောလှနျနမေယျ့သူတှကေတော့ မရှိရငျရှိတဲ့ လကျနကျပေါ့၊ ကြှနျမတို့ဆှဲကိုငျထားဆဲ့ဓါးတှေ၊လေးဂှတှနေဲ့ ဒီလိုလကျနကျတှကေိုကိုငျပွီး ဒီတိုကျပှဲကို ကြှနျမတို့နိုငျတဲ့အထိကြိုးစားမှာပါ၊ ပွညျသူတှကေလညျးကြှနျမတို့ကို ယုံကွညျပေးပါ၊ ဘယျတော့မှ နောကျပွနျမဆုတျဘဲ ဒီတိုကျပှဲကိုဆကျတိုကျသှားမှာပါ၊ ပွညျသူတှကေလညျး … Read more
“”ဖေဖေ ဖေဖေ “ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့ခေ့ါ်သံနဲ့အတူ ..
လယ်ဝေးသူရဲကောင်း…ငါ့ကိုဖမ်းသတဲ့လား? *ဟား ဟား ဟား*အနားကပ်ရဲကပ်ကြည့်ရှိတာနဲ့ခုခံမယ် ၊၊ စစ်ခွေးနှစ်လောင်းကျမှ ဆီးခုံကျည်ထိအဖမ်းခံခဲ့ရ.. ဘိုင်းကနဲလဲမကျအောင် ဟန်ဆောင်.. ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဓားကိုဆုတ်.. ဟန်လုပ်ပြီးမတွန့်ဆုတ်ပေမဲ့ “”ဖေဖေ ဖေဖေ “ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့ခေ့ါ်သံနဲ့အတူ ..သူ့ဆီမင်းမူပြေးအလာ.. စစ်ခွေးက ကလေးခြေတဖက်ကို ပစ်ချထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့- – ကမ္ဘာခြားတော့မည့် သတိတရားတွေဝေဝါး…” သား “ဆိုတဲ့ တော်လဲသံပဲ့တင်ထပ်.. ငါ့သားနား ကပ်ရဲတဲ့ကောင်ကပ်စမ်းဆိုပေမဲ့လည်း.. ဘိုင်းကနဲလဲကျ .. သူ့ကိုယ်သူသတိမလစ်ရအောင် .. ဟန်မဆောင် မထိမ်းမတ်နိုင်တော့မှ .. စစ်ခွေးတွေက ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေ့ါ်ဆောင်သွားတယ်၊၊ သေတယ်ရှင်တယ် သတင်းမရပေမဲ့ သူသားလေးကတော့ ခြေပြတ်ဒုက္ခိတဘဝနဲ့.. အနာဂတ်မှာ သက်သေခံပစ္စည်းပမာ- – သူရဲကောင်းကြီးသိချင်မှသိရှာလိမ့်မယ်၊၊ ကိုယ့်လူရေစိတ်ချဟေ.. ကလေးနဲ့မိသားစု ကိုယ်လူ့တို့နယ်က ပြုစုဦးညွတ်စေဖို့ … ကျုပ်တို့ တာဝန်ထားလိုက်ပါ သူရဲကောင်းကြီးရေ – – – Shweko … Read more
One Championship ရဲ့ ပါဝါအား အပြင်းဆုံးနဲ့ အကြမ်းဆုံးဆု ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
One Championship ရဲ့ ပါဝါအား အပြင်းဆုံးနဲ့ အကြမ်းဆုံးဆု ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း လေ့ကျင့်ထားတဲ့ MMA ကစားသမားတွေတောင် အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ Kick Power Boxing Power တွေကို မခံနိုင်ကြဘူးဆိုတာ သူ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်နော်။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်သားကြီးကန်ဟဆဲလ်ဂါဝါဆိုရင် နံရိုးတွေပါကျိုးပြီး အတွင်းပိုင်း သွေးယိုစိမ့်မှုတွေနဲ့ အသက်ကိုပါ မနည်းလုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ အဲ့လိုအားပါပြင်းထန်တဲ့ ကန်ချက်တွေ တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတွေ နဲ့ကြောက်ရွံစိတ်ကင်းမဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲ ပရိတ်သတ်အချစ်တော်မြန်မာ့စပါးအုံးကြီးကတော့ One Championship ရဲ့ ပါဝါအားအပြင်းဆုံး နဲ့ အကြမ်းဆုံးဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အချစ်တော် နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ ကိုကမ္ဘာကသိစေခဲ့သူ ကချင်သားကြီး အောင်လအန်ဆန်းကတော့ MMA လောကမှာ မသိသူမရှိလောက်အောင်ကို အောင်မြင်ကျော်ကြားလှသူဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူ့ရဲ့ ချုပ် ကွက် … Read more
ကလေးတွေသေတဲ့အခါ သစ်ပင်‌ကြီးတွေထဲကို ထည့်သွင်းမြှုပ်နှံလေ့ရှိတဲ့ ရွာငယ်လေး
အင်ဒိုနီးရှားဘက်မှာဆိုရင် ပရိသတ်တို့ အတွက် အထူးအဆန်းတွေဖြစ်နေစေမယ့် ရွာဓလေ့တွေအယူအဆတွေကို များစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ သေပြီးသားလူတွေကို ပြန်ဖော်ပြီးတော့ အဝတ်အစားတွေဝတ် သန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ပေးတတ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားရွာလေးအကြောင်းကိုလည်း ပရိတ်သတ်တို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီတစ်ခုကလည်း အဆိုပါရွာလေးရဲ့ နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့ အယူအဆဓလေ့တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဗဟုသုတအဖြစ် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ထူးဆန်းတဲ့ရွာလေး တစ်ရွာ ရှိပါတယ်။ ရွာလေးဟာ ရှေးဘုရင်တွေရဲ့ လက်အောက်ခံမင်းညီမင်းသားတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ရွာလေး တစ်ခုဖြစ်ပြီး Tana Toraja ဆိုတဲ့ အမည် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီရွာလေးမှာဆိုရင် ရှေးခေတ် အယူအဆတွေ မပျောက်သေးပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကလေးငယ်လေးတွေသေတဲ့အခါကျရင် အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အထဲမှာ သစ်ပင်ကို အခေါင်းပေါက်ပြုလုပ်ပြီး မြှုပ်နှံကြပါသတဲ့။ သူတို့ ဓလေ့ယုံကြည်မှုကတော့ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ဝိညာဉ်တွေဟာ သဘာဝသစ်ပင်တွေပေါ်မှာမှီခိုပြီးတော့ လေနဲ့အတူ အဝေးကို လွတ်လပ်စွာရောက်ရှိသွားဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ တည်ရှိတဲ့နေရာကတော့ Makassar … Read more
အင်အား ၁၅၀ ကျော်ပါ စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို YDF က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်
အင်အား ၁၅၀ ကျော်ပါ စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို YDF က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက် အင်အား ၁၅၀ ကျော်ပါ စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို YDF က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်၊ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀ ကျော် သေဆုံး ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆော-ကျောထုလမ်းပိုင်းတွင် စစ်ကြောင်း ၂ ကြောင်းဖြင့် ချီတက်လာသော အင်အား ၁၅၀ ကျော်ပါ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် နံနက် ၅ နာရီခန့်တွင် YDF (ဆော-ကျောက်ထု) အဖွဲ့မှ မိုင်းခွဲခိုက်ပြီး စစ်ကောင်စီမှ ၂၀ ဦး ထက်မနည်း သေဆုံးကြောင်း YDF က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ YDF (ဆော-ကျောက်ထု) အဖွဲ့မှ မိုင်းအကြီး ၂ … Read more
စစ်ကောင်စီကို ထောက်ပံ့နေသည့် မန္တလေးက မျိုးသိန်းလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် မီးရှို့ခံရ(ရုပ်သံ)
စစ်ကောင်စီကို ထောက်ပံ့နေသည့်အတွက် မန္တလေး မျိုးသိန်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ကို မီးရှို့ဟု We for Revolution ပြော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ (၇၃)လမ်းရှိ မျိုးသိန်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွင် ယနေ့ ၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၇နာရီကျော် မီးလောင်မှုသည် We for Revolution အဖွဲ့၏ လက်ချက်ဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီထောက်ပံ့နေသည့်အတွက် မီးရှို့ရခြင်းဖြစ်​ကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ မန္တလေးမျိုးသိန်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုသည် နံနက် ၇ နာရီကျော်မှ နံနက် ၈ နာရီခွဲ အထိ ၁ နာရီကျော်ကြား မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ WE for Revolution အဖွဲ့သားများက စစ်ကောင်စီ​၏ ဒေါက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် ” မျိုးသိန်း လျှပ်စစ်ဆိုင်ကို ” … Read more